महिलाहरुले ध्यान दिनैपर्ने कुरा: महिनावारीका बेला कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नु उचित ? – Sanchar Patrika
महिलाहरुले ध्यान दिनैपर्ने कुरा: महिनावारीका बेला कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नु उचित ?
January 5, 2021 66
काठमाडौँ । महिनावारी भएका बेला आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा त कुनै शं’का छैन् । महिनावारीका बेला सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन नसकेमा विभिन्न किशिमका संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने प्याड, लुगा वा न्यापकिन कस्तो प्रकारको छ र कति समयको अन्तरालमा परिर्वतन
गर्ने गरिन्छ यी सब कुरा सिधै स्वास्थ्यसँग जोडिने गर्दछ । के तपाईलाई थाहा छ रु महिनावारीका बेला एक दिनमा कतिपटकसम्म प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर । महिनावारीका बेला कतिपटक प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार महिनावारीका बेला प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड बदल्नुपर्दछ ।
यदि तपाई घरेलु कपडाको टुक्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त झन प्रत्येक २–२ घण्टामा बदल्नुपर्दछ । तर यो नियम सबैका लागि समान ढङगले लागू हुन्छ भन्ने छैन् । प्याडको प्रकृति, रगतको मात्रा हेरेर पनि प्याड परिवर्तन गर्ने समय निर्धारण हुने गर्दछ ।
हुन त आफ्नो आवश्यकताका आधारमा प्याड बदल्नुपर्दछ तर धेरै लामो समयसम्म एउटै प्याड प्रयोग गरिरहनु भने स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुदैन् ।
एकपटक रगत शरीरबाट बाहिर निस्किएपछि विभिन्न प्रकारबाट दुषित हुने गर्दछ । धेरै रगत बगेको बेला मात्र नभई रगत बग्ने क्रम कम भएको बेला पनि प्याड परिवर्तन गरिरहनै पर्दछ । लामो समयसम्म एउटै प्याड प्रयोग गरिरहेमा पिसाब संक्रमण लगायतका संक्रमण हुने जोखिम धेरै हुने गर्दछ ।
एक सयमा एउटामात्रकोही कोहीले धेरै रगत बगेको भन्दै एकैपटकमा २ वटा प्याड वा कपडा प्रयोग गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ तर यो स्वास्थ्यको हिसाबले निकै गलत हो ।
धेरै रगत बगेको बेला यसले मद्दत गरेपनि स्वास्थ्यका लागि यो उपयोगी तरिका होइन । २ वटा प्याड प्रयोग गर्दा परिवर्तन गर्ने समय लम्बिने भएका कारण बरु एउटै प्याड प्रयोग गर्ने र छिटो–छिटो परिर्वतन गर्ने गर्नुपर्दछ ।
Prevसुताइको पोजिसनबाट पनि थाहा पाउनुहोस् तपाईको पार्टनरले तपाईलाई कति माया गर्दछन् ?
Nextयस्ता खाना खानमा नगर्नुहोस् लापरवाही, आन्द्रामा प्वाल र घाउ हुनसक्छ !